ch 14 မဿဲ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 14 မဿဲ
14:1 အဲ့အချိန်မှာ, Herod the Tetrarch heard the news about Jesus.
14:2 မိမိအစေခံကျွန်တို့အားဆို၏: “This is John the Baptist. He has risen from the dead, and that is why miracles are at work in him.”
14:3 For Herod had apprehended John, and bound him, and put him in prison, သောကြောင့်, ဟေရောဒိ၏, the wife of his brother.
14:6 ထိုအခါ, on Herod’s birthday, the daughter of Herodias danced in their midst, and it pleased Herod.
14:8 ဒါပေမယ့်, having been advised by her mother, လို့သူကပြောပါတယ်, “Give me here, onaplatter, the head of John the Baptist.”
14:9 ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်အလွန်ဝမျးနညျးခဲ့. သို့သော်သူ၏ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြု၏, and because of those who sat at table with him, he ordered it to be given.
14:13 ယရှေုသညျကွားသိပြီးမှ, သူလှေဖြင့်ထိုအရပ်မှနုတ်ထွက်, မိမိကိုမိမိတစ်ဦးတောအရပျမှ. ထိုအခါလူအစုအဝေးကကြားလျှင်, သူတို့အမြို့မြို့တို့မှခြေလျင်သူ့ကိုနောက်တော်သို့လိုက်.
14:14 ထိုအထွက်, သူတစ်ဦးကြီးစွာသောအလုံးအရင်းကိုမြင်လျှင်, သူကသူတို့ကိုသနားယူ, သူကသူတို့ရဲ့ဖျားနာကုသ.
14:15 ညဦးရောက်ရှိလာပြီးမှ, တပညျ့တျောတို့သချဉ်​​းကပ်, ဟုဆို: "ဒီတောအရပျဖြစ်ပါသည်, နှင့်နာရီယခုလွန်ပြီ. လူအစုအဝေးဖယ်ထုတ်ပါ, သောကြောင့်, မြို့ရွာသို့သွားသဖြင့်, သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်အဘို့စားစရာကိုဝယ်စေခြင်းငှါ။ "
14:16 သို့သော်ယေရှုက: "သူတို့ကသွားစရာအကြောင်းမရှိ. သူတို့ကိုကိုယ်အဘို့ကိုယ်စားရန်တစ်ခုခုပေးပါ။ "
14:17 သူတို့ကသူ့ကိုပြန်ပြော, "ကျနော်တို့ကဒီမှာဘာမျှမရှိသည်, မုနျ့ငါးလုံးနှငျ့ငါးနှစျ မှလွဲ. ။ "
14:18 သူကထိုသူတို့အားပြောဆို, "ငါ့ကိုရန်ဒီနေရာကိုသူတို့ကိုယူလာပါ။ "
14:19 သူသည်ထိုအမြက်ပင်ပေါ်မှာလျောင်းကြလူအစုအဝေးအမိန့်ပြီးမှ, သူကမုန့်ငါးလုံးနှငျ့ငါးနှစျကိုယူ, မိုဃ်းကောင်းကင်မှတက်ငေး, သူမင်္ဂလာရှိနှင့်ဖဲ့တပည့်မှမုန့်ကိုပေးတော်မူ၏, ထိုလူအပေါင်းတို့ကိုရန်နှင့်ထို့နောက်တပည့်.
14:20 ထိုသူအပေါင်းတို့သည် စား. ဝကြ. ထိုသူတို့အကြွင်းအကျန်ကိုတက်ယူ: အကျိုးအပဲ့များအပြည့်အဝတဆယ်နှစ်လုံးကိုခြင်းတောင်း.
14:21 အခုဆိုရင်စားသောသူအရေအတွက်လူငါးထောင်ခဲ့သည်, အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများမှတပါး.
14:22 ယရှေုသညျခကျြခငျြးလှပျေါသို့ကိုတက်အားမိမိတပည့်အနိုင်အထက်, နှင့်ပင်လယ်ဖြတ်ကူးမှာသူ့ကိုအရင်အဦးနေရာမှ, သူသည်လူအစုအဝေးပယ်ချစဉ်.
14:23 ထိုအခါလူအစုအဝေးပယ်ချပြီးမှ, သူဆုတောင်းဖို့တောင်ပေါ်သို့တယောက်တည်းတက်ပြီ. ညဦးရောက်လာတဲ့အခါ, ထိုအရပ်၌တယောက်တည်း.
14:24 သို့သော်ထိုပင်လယ်အလယ်၌, လှေကိုလှိုင်းတံပိုးများကအကြောင်းပစ်လွှတ်လိုက်တယ်ခံခဲ့သည်. လေသည်သူတို့တဘက်၌ခဲ့သည်.
14:25 ထိုအခါ, ညဉ့်စတုတ္ထယံ၌, သူကသူတို့ကိုဆီသို့ရောက် လာ. ,, သမုဒ္ဒရာကိုအပေါ်သို့လမ်းလျှောက်.
14:26 သူ့ကိုကိုပင်လယ်အပေါ်သို့လမ်းလျှောက်မြင်လျှင်, သူတို့စိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်, ဟုဆို: "ဒါဟာ။ တစ်ဦး apparition ရှိရမည်" ထိုသူတို့အော်ဟစ်, သောကွောငျ့ကွောကျရှံ့ခွငျး၏.
14:27 ထိုခဏ, Jesus spoke to them, ဟုဆို: “Have faith. ဒါဟာငါဖြစ်ပါသည်. Do not be afraid.”
14:28 Then Peter responded by saying, "သခင်, if it is you, order me come to you over the waters.”
14:29 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, “Come.” And Peter, descending from the boat, walked over the water, so as to go to Jesus.
14:30 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, seeing that the wind was strong, he was afraid. And as he began to sink, သူဟစျကျွော, ဟုဆို: "သခင်, save me.”
14:31 And immediately Jesus extended his hand and took hold of him. သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်, “O little in faith, why did you doubt?"
14:33 Then those who were in the boat drew near and adored him, ဟုဆို: "အမှန်ဆိုသည်ကား,, you are the Son of God.”
14:36 ထိုသူတို့ကသူ့ကိုအသနားခံ, so that they might touch even the hem of his garment. And as many as touched it were made whole.